IPeru izokhawulela ukufinyelela kwiMachu Picchu ukuyivikela ekuvakasheni kwabantu abaningi | Izindaba Zokuhamba
IPeru izokhawulela ukufinyelela kwiMachu Picchu ukuyivikela ekuvakasheni kwabantu abaningi
Maria | | Izaziso, Peru
Sisanda kukhuluma ngokuthi uhulumeni wasekhaya eVenice uthathe kanjani uchungechunge lwezinyathelo ukuvikela iSt. .
Futhi ukuthi idolobha elidume kakhulu le-Inca lisemaphethelweni okuwa ngenxa yolayini abakhulu bokungena nokuvala, ukuthenga amathikithi noma ukumane uye endlini yangasese. Ukutheleka okukhulu kwabavakashi abavakashela iMachu Picchu nsuku zonke sekudale ukuthi iziphathimandla zande imingcele yokufinyelela kule ndawo.
Lezi zinyathelo zamukelwa ngemuva kokuthi i-UNESCO ixwayise ngokufaka uMachu Picchu ohlwini lwamagugu emhlabeni osengozini uma kungathathwa izinyathelo. Zimayelana nani?
1 Kungani kwathathwa lezi zinyathelo?
2 Kuyini iMachu Picchu?
3 Itholakala kuphi?
4 Izakhiwo Nezomlando
5 Ungafika kanjani eMachu Picchu?
Kungani kwathathwa lezi zinyathelo?
Ngo-1983 iMachu Picchu yamenyezelwa njenge-Unesco njengeGugu Lomhlaba. Ngaleyo minyaka yokuqala, inqaba yase-Inca yayamukela izivakashi ezingaphezu kwezinkulungwane eziyikhulu ngonyaka. Kodwa konke kwashintsha ngo-2007 ngenkathi yamukelwa njengenye yeNew 7 Wonders of the Modern World yinkampani yaseSwitzerland iNew Open World Corporation. Amathikithi ayizinkulungwane eziyisishiyagalombili athengiswa ngalowo nyaka futhi konke kwasheshiswa kwaze kwaba ngonyaka odlule lapho kwamukelwa izivakashi eziyi-1.419.507. Ukwanda okumangazayo kokuvakashelwa okunzima ukugaya.
I-Unesco yanikeza uhulumeni wasePeruvia isikhathi seminyaka emibili ukwenza ngcono ukuphathwa kokongiwa kwedolobha noma kungenjalo kuzobandakanya iMachu Picchu ohlwini lomhlaba lwezindawo ezingamaGugu ezisengozini. Ngaphambi kokuphela kwalowo tie, futhi okujabulisa bonke, izinyathelo ezethulwayo bezanele emehlweni eKomidi ukuthi zingafaki itshe lesikhumbuzo kulolo hlu.
Le yimithetho emisha eqale ukusebenza ngoJulayi 1 futhi ifaka phakathi:
Akuvunyelwe ukungena eMachu Picchu ngaphandle komhlahlandlela.
Umhlahlandlela ngamunye ungathatha ubuningi babantu abayi-16.
Kusungulwa amahora amabili okuvakasha. Iqembu lokuqala kusuka ngo-6 ekuseni kuya ku-12 emini bese kuthi iqembu lesibili lisuke ngo-12 emini liye ku-17: 30 ntambama.
Ithikithi linikeza ilungelo lokuhlala amahora amane kuphela ngaphakathi kwesiza. Ngaleso sikhathi ungashiya futhi uphinde ufinyelele kabusha kanye ukuya ezinsizakalweni.
Kubalulekile ukuthola ukungena kweMachu Picchu ngaphambi kokuvakasha ngewebhusayithi esemthethweni.
Ukungena kwamahhala kwezakhamizi zaseCuzco kungamaSonto kuphela.
Ukufinyelela kwi-Machu Picchu ngezinti ze-selfie, izambulela, izinsimbi zomculo, izinqola zabantwana, izilwane nokudla neziphuzo akuvunyelwe.
Kuyini iMachu Picchu?
Kungumuzi wase-Inca ogama lakhe lisho intaba endala futhi ulithatha endaweni lapho litholakala khona. Isakhiwo esakhiwe ngokuzungezwa yimigudu yamanzi, amapulatifomu namathempeli kukholakala ukuthi sakhiwa ngekhulu le-XNUMX yi-Inca Pachacutec. Ngesikhathi sayo kwakuyisikhungo esibalulekile sokuphatha, sezenkolo nezepolitiki. Namuhla amanxiwa ayo abhekwa njengeCultural Heritage of Humanity yi-Unesco.
Kutholakala amakhilomitha ayi-112 enyakatho-ntshonalanga yeCuzco, esifundazweni sase-Urubamba, le nqaba izungezwe yimigudu yamanzi, amathempeli nezinkundla.
IMachu Picchu yehlukaniswe imikhakha emibili: owezolimo oqukethe inethiwekhi yamapulatifomu noma amasimu okufakelwa kanye nasedolobheni okwenze imisebenzi yokuphatha futhi kwakhiwa izikwele nezakhiwo ezifana neThe Temple of the Sun, iThempeli lamaWindows amathathu , Ithempeli Elikhulu kanye noMkhakha Wama Condor.
Lezi zakhiwo zinesitayela se-Inca sakudala: iminyango yama-trapezoidal namawindi noma izindonga zamatshe ezinomumo ongunxande ohlanganiswe ngaphandle kokusebenzisa ama-amalgams.
Ukwakhiwa kwayo kulandela isitayela se-Inca yakudala: izakhiwo ezinezindonga zamatshe ezipholishiwe ezimise okonxande, zihlanganiswe ngaphandle kokusebenzisa ama-amalgams, iminyango yama-trapezoidal namawindi. Izakhiwo zayo ezinhle zinezakhiwo ezingaba ngu-140 kulo lonke leli dolobha.
IMachu Picchu yatholwa ngenxa yomcwaningi uHiram Bingham III owayefuna inhlokodolobha yokugcina yama-Incas Vilcabamba. Eminyakeni eyalandela isethi yayizomenyezelwa njenge- "Historic Sanctuary of Peru" ngo-1981.
Ungafika kanjani eMachu Picchu?
Ukufika eMachu Picchu ungakhetha imizila emibili: ngokusebenzisa umzila we-Inca noma ngesitimela oya e-Aguas Calientes futhi ukusuka lapho uthatha imoto noma uhamba ngezinyawo uze ufike entabeni lapho ikomkhulu likhona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » Peru » IPeru izokhawulela ukufinyelela kwiMachu Picchu ukuyivikela ekuvakasheni kwabantu abaningi
Izitolo ezi-5 ezinhle zekhofi eBruges
I-Alhambra eseGranada ivula izingadi zeGeneralife mahhala